WARBIXIN: Kadib In Real Madrid Ay Badalkii Zinedine Zidane Ka Dhigatay Julen Lopetegui-Maxay Yihiin Dhibaatooyinka Ugu Waa Wayn Ee Ay Tahay In Macalinka Cusub Uu Xalin Doono. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Kadib In Real Madrid Ay Badalkii Zinedine Zidane Ka Dhigatay Julen Lopetegui-Maxay Yihiin Dhibaatooyinka Ugu Waa Wayn Ee Ay Tahay In Macalinka Cusub Uu Xalin Doono.
June 12, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in macalinka xulka qaranka Spain ee Julen Lopetegui uu noqon doono badalka tooska ah ee Zidane Zidane, waxaana macalinka cusub ee Los Blancos horyaala hawlo badan oo ay tahay in uu wax ka qaban doono marka uu soo dhamaysto koobka aduunka ee khamiista ka furmi doona Russia.
Zinedine Zidane ayaa muddo laba sano iyo badh ah Real Madrid kula soo guulaystay sagaal koob oo ay saddex ka mid ahi yihiin koobka Champions League wuxuuna noqon doonaa min qiyaaska la barbar dhigi doono guul kasta ama hawl kasta oo uu qaban doono Julen Lopetegui taas oo aan noqon doonin wax sahlan.
Zidane ayaa hore Madrid iyo kubbada cagta ugaga yaabsaday markii uu ciyaaraha ka fadhiistay sanad ka hor waqtigii uu heshiiskiisa Madrid dhacayay, wuxuuna Bernabeu ka baxay isaga oo geesi ah ka ciyaartoy ahaan iyo ka tababare ahaanba, waana rekoodh ay adag tahay in shaqsi kale uu gaadhi karo.
Dhibta ugu wayn ee tababaraha cusub ee Julen Lopetegui la kulmi doonta ayaa ah in aanu markiiba heli doonin kalsoonidii iyo sumcadii uu Zidane maalintii ugu horaysay kaga bilawday xarunta tababarka Madrid maadaama oo uu hore ugu jiray quluubta mucaashiqiinta kooxda Real Madrid isla markaana uu ahaa shaqsi markasta kooxda ka agdhawaa.
Laakiin dhibta ka wayn ee Julen Lopetegui hortaal ayaa ah mid ka wayn, sida laga filayo sababtoo ah waxa uu Zidane u baxay in la helo tababare kale oo sii wadi kara guulihii uu kooxda soo gaadhsiiyay labadii sano iyo badhkii ugu danbeeyay taas oo aad u adag in la sii joogteeyo.
In Zidadan uu 9 koob kula soo guulaystay Real Madrid muddo saddex sano ka yar, waxayna dhibaatada ugu wayn ku noqon kartaa waxa laga filan karo tababaraha cusub ee Julen Lopetegui , waxa kale oo macalinka cusub hortaala dhibaato qolka labiska Madrid ah iyada khabiirada kubbada cagta qaar u arkaan in ay tahay arinta Zidane ku qasabtay in uu go’aankii bixitaanka gaadhay.
Xalinta Mustaqbalka Cristiano Ronaldo, Gareth Bale iyo Keylor Navas:
Tababaraha cusub ee Real Madrid ee Julen Lopetegui waxaa horyaala saddex arimood oo dhinaca mustaqbalka ciyaartoyda ah oo aad muhiim ugu ah Los Blancos, waxayna kala yihiin Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale oo labaduba si cad shaki u galiyay mustaqbalkooda Bernabeu kadib guushii finalkii Champions league ee Kiev.
Waa wax xaqiiq ah in Gareth Bale iyo Zidane ay dhibaato isla soo mareen waqtiyadii ugu danbeeyay, waxaana si cad bixitaankiisa loogu saleeyay in madax wayne Perez uu macalinka ree France ka dalbay in uu boos shaxdiisa uga helo Bale si aanu kooxda uga bixin, laakiin waa arin markale la hor dhigi doono tababaraha cusub ee Julen Lopetegui kaas oo waliba isaga lagu qasbi doono in uu Bale shaxdiisa boos ka siiyo maadaama oo uu kooxda ku cusub yahay.
Arinta kale ee muhiimka ah ayaa ah sidii Cristiano Ronaldo loogu qancin lahaa in uu Bernabeu ka sii wato waayihiisa ciyaareed kadib markii uu si lama filaan ah u gil gilay xafladayntii Real Madrid ee koobka Champions league isaga oo si lama filaan ah u sheegay in uu mustaqbalkiisa kala cadayn doono isla markaaana uu jamaahiirtiisa gaarka ah u sheegi doono halka uu mustaqbalkiisu noqon doono.
Cristiano Ronaldo waxa uu diyaar u yahay inuu Real Madrid sii joogo, laakiin waxa uu si cad u doonayaa in uu la mushaar noqdo ama uu ka badnaado xidigaha Lionel Messi iyo Neymar Jr, taas oo ay maamulka Perez muddo sanad ah ka soo cago jiidayeen, waxayna taasi keentay cadhadii Ronaldo ee Kiev iyo waliba qaabkii aan gabashada lahayn ee uu shakiga ugu abuuray jamaahiirta Madrid iyo caalamka.
Tababaraha cusub ee Julen Lopetegui waxa uu culays ka saarmi doonaa sidii uu Ronaldo ugu qancin lahaa in uu kooxda sii joogo balse ma noqon doonto mid isaga oo kaliya ku xidhan maadaama oo uu Ronaldo u arko in koox uu wax walba u soo huray ayna mushaarkiisa gaadhsiin xidigaha uu u arko in uu ka fiican yahay ee Messi iyo Neymar.
Haddii maamulka Madrid iyo macalinka cusub ee Julen Lopetegui ay xal fiican u helaan Gareth Bale oo doonaya in boos joogto ah loo balan qaado ama uu iska baxo iyo Ronaldo oo mushaar badan doonaya waxay noqon kartaa in qayb wayn oo dhibaatada Madrid ah la xaliyay.
Qaybta kale ee soo raacdaa waa mustaqbalka goolhaye Keylor Navas kaas oo Zidane iyo Perez si wayn ugu kala duwanaayeen wuxuuna Zidane u arkayay Navas in uu yahay goolhaye shaqadiisa ka soo baxay wuxuuna bishii January is hortaagay in goolhayaha Athletic Bilbao ee Kepa uu ku soo biiro Bernabeu inkasta oo maamulka Madrid ay diyaar u ahaayeen in ay bixiyaan lacagta heshiiskiisa lagu burburin karayay.
Hadda waxay u muuqataa in tababaraha cusub Julen Lopetegui badali doonaa uu dhexda u gali doono arinta Perez iyo Navas kaas oo ay suurtogal tahay in ugu yaraan la keeni doono goolhaye si toos ah ugula tartami doona booska kowaad haddii aan gabi ahaanba booskan laga qaadin.
Real Madrid ayaa si wayn loola xidhiidhinayaa David De Gea, Thibaut Courtois iyo Bernd Leno taas oo ugu danbayn keeni karta in Navas uu booskiisa waayi karo waana arin macalinka cusub iyo maamulka Madrid ay ka wada hadli doonaan.
Goolhaye Navas oo ogaa qaabkii uu Zidane isku hortaagay heshiiskii ay maamulka Madrid la gaadheen goolhayaha Athletic Bilbao ee Kepa Arrizabalaga ayaan markan heli doonin awood la mid ah tii Zidane wuxuuna halis ugu jiraa in waqtigiisii fiicnaa uu soo dhamaado.
Siyaasada Suuqa Iyo Xoojinta Ay Real Madrid U Baahan Tahay:
Marka uu soo dhamaysto koobka aduunka isla markaana uu diyaar u noqdo shaqada hadda loo magacaabay, waxa uu Julen Lopetegui markiiba u baahan doonaa in uu maamulka sare kala hadlo qorshaha suuqa iyo ciyaartoyda la doonayo in la keeno Bernabeu, waxaana la fahansan yahay in Neymar Jr uu qayb ka yahay xidigaha Real Madrid laga doonayo.
Iyada oo Real Madrid xili ciyaareedkii dhamaaday kaalinta saddexaad kaga dhamaysatay horyaalka La Liga isla markaana awoodi wayday inay koobka difaacato, waxa uu Perez doonayaa in uu isbadal wayn ka sameeyo kooxdiisa laakiin taasi waxay u baahan doontaa lacag badan iyo waliba dadaal badan taas oo uu macalinka cusubi isna soo bandhigi doono xidigaha uu u arko in ay qorshihiisa caawin karaan.
Dhiiro Galinta Ciyaartoyda Hadda Santiago Bernabeu Ku Sugan:
Waxaa hubaal ah in marka ay kooxi koobab muhiim ah ku soo guulaysato uu hoos udhigi karto dhiiro galintii iyo hamuumtii ay u qabtay in ay wax ka badan gaadho, waxaana arintan hadalo isku mid ah ka sheegay Pep Guaridila iyo Zidane markii ay baxayeen.
Markii uu Guardiola ka baxayay Camp Nou waxa uu sheegay in aanu garanayn wax intaas ka badan oo uu ku dhiiro galin karo ciyaartoydii uu koob kasta kula soo guulaystay waqtigiisii Barcelona, laakiin sanado badan kadib Zidane ayaa isla hadalkan ka sheegay markii uu shaaciyay in uu iscasilay.
Zidane ayaa sheegay: “Intaas wax ka badan ciyaartoyda kama dalban karo” Wuxuuna sheegay in cod cusub, fikrad cusub iyo isbadal ay u baahan tahay Real Madrid si kooxdu ay guulaha u sii wadan karto, waxayna tani muujinaysaa in waxa ugu wayn ee macalinka cusub horyaalaa ay tahay sida uu dhiiro galin cusub iyo hami kale uu ugu abuuri lahaa ciyaartoyda uu Zidane ka dhaxlay.
Si kastaba ha ahaatee, qodobada aan soo sheegnay iyo kuwo la mid ah ayaa noqon doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee la arki doono sida uu wax uga qaban karo macalinka cusub ee Julen Lopetegui kaas oo mar walba ay dhibaato ku noqon doonto in halbeeg iyo min qiyaas looga dhigi doono tababare Zidane oo rekoodh layaableh soo sameeyay.
LIVE: Toos U Daawo Kulanka Urugauy Vs Saudi Arabia- Maxaa Kala Haysta Luis Suarez Iyo Difaaca Sacuudiga Ee Loo Hanjabay.
Portugal Oo Guushiisii Ugu Horeeyay Ee Koobka Aduunka Gaadhay, Xulka Qaranka Morocco Oo Bandhig Layaableh Sameeyay Balse Koobka Aduunka Ka Hadhay Iyo Cristaino Ronaldo Oo Kulankan Go’aamiyay.